Horudhac: Arsenal vs Liverpool… (Kooxdee u gudbi karta fiinaalka tartanka Carabao Cup?) – Gool FM
(London) 20 Jan 2022. Waxaa la ciyaari doonaa kulanka lugta labaad ee is-aragga Arsenal iyo Liverpool ee wareegga afar-dhammaadka tartanka Carabao Cup, iyadoo Gunners ay doorkan soo dhoweyneyso Reds.
Labada naadi ayaa barbarro goolal la’aan ah kusoo kala baxay kulankii lugta hore ee ka dhacay garoonka Anfield iyadoo ay Arsenal casaan qaadatay qaybtii hore ee ciyaartaas, waxayna taasi ka dhigan tahay inay kooxdii guuleysato ay gaari doonto fiinaalka tartanka EFL Cup.
Aqriste tartankan kama jiro sharciga goolka bannaanka sidaas darteed, barbarro walba waxaa raaci doona waqti dheeri ah, haddii lagu kala adkaan waayana rigooreyaal, kooxdii adkaata ayaana fiinaalka tartanka la ciyaari doonta Chelsea oo kasoo tallaabsatay Tottenham Hotspur.
Tartanka: England – Carabao Cup
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 10:45 Habeennimo xilliga Geeska Afrika.
Arsenal ayaa dib u heleysa xiddigeeda khadka dhexe ee Thomas Partey kaddib markii xulkiisa Ghana laga soo reebay tartanka qarammada Africa ee AFCON 2021, waxaase shaki la gelinayaa in la heli karo Emile Smith Rowe, Takehiro Tomiyasu iyo Martin Odegaard.
Dhanka kale, Liverpool ayaa weyneysa xiddigeeda khadka dhexe ee Alex Oxlade-Chamberlain kaasoo anqowga ka dhaawacmay kulankii Brentford, waxaana uu Thiago Alcantara iyo Divock Origi kula biiray xiddigaha maqan iyadoo laba laacib ee dambe ay maqnaan doonaan illaa bisha dambe.